Ebe Kachasị mma iji budata Akwụkwọ na-akwụghị ụgwọ | Akụkọ akụrụngwa
Paco L Gutierrez | | ndị na-agụ akwụkwọ
Ọrịa ahụ ezughị ike, mana anyị enweghị ike ịda. Maka nke a, anyị nwere ike iji ọtụtụ ihe omume ntụrụndụ ma mee ka ụlọnga a bụrụ ihe bara uru, ma ọ bụ mechaa usoro ndị ahụ anyị na-echere, egwuregwu vidiyo ndị ahụ na-enweghị amalite ma ọ bụ onwe anyị baa ọgaranya site na ụfọdụ ọmarịcha akwụkwọ dijitalụ. Ọ bụghị oge ọjọọ omenala na maka nke a anyị nwere ọtụtụ free nhọrọ.
Ọ bụrụ na anyị nwere a Mbadamba ụrọ ma ọ bụ Smartphone Site na diagonal buru ibu, anyị nwere ike iji ohere dị iche iche nke saịtị dị iche iche wee budata ọtụtụ puku utu aha efu. Ọ bụ nnukwu uru na-atụle na ịzụta akwụkwọ anụ ahụ n'oge a dị mgbagwoju anyaỌbụna ịzụta ha na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, enwere ike ịnwe nsogbu ngwaahịa ma ọ bụ nkesa. Maka nke a anyị ga-enye gị ya nhọrọ ka mma iji nweta ha n'ụlọ na n'efu.
1 Nkwado Editọ maka Mkpọrọ
1.2 Ihe osise
1.4 Akwụkwọ Roca
2 Wayszọ ndị ọzọ iji nweta akwụkwọ n'efu na iwu
2.3 Ka anyị gụọ
2.4 Akwụkwọ nri
Nkwado Editọ maka Mkpọrọ
Offọdụ n'ime ndị nkwusa kachasị ike na-enye ụdị nnwere onwe nnwere onwe iji gosi ịdị n'otu na ndị bi na ya. Ọ bụ ezigbo mmegharị iji kwalite ọdịbendị n'oge ndị siri ike dị ka nke a.
Akwa nkwusa a na-enye a mkpọ akwụkwọ 11 maka nkwalite a. Na mgbakwunye na nke a, ị ga-ahụ a kalenda ebe anyi nwere ike sorochi ihe ndi ozo agugoro. N'ụzọ dị otú a, anyị na-anọgide na-arụsi ọrụ ike iji nyochaa ntopute nke onyinye ahụ. HERE anyị nwere ike ịnweta.
Lee anyị na-ezute 5 ọrụ site n'aka ndị edemede nyere onyinye Herralde, iji nweta nbudata gị site na nyiwe nke ị na-ekesa akwụkwọ gị na ntanetị, dị ka IBooks, Amazon, Google Play na ụfọdụ ndị ọzọ. HERE anyị nwere ike ịnweta.
Karịa ọrụ iri abụọ nke akwụkwọ ndị ntorobịa Ha bụ akụkụ nke onyinye sara mbara nke onye nkwusa a na-enye n'efu. Maka ndị na-eto eto niile chọrọ iwepụ ntakịrị na YouTube na Netflix. Ọ dịghị mfe ịchọta njikọ maka ịnweta, ị nwere ike ịchọta ha site na ịnweta Ngalaba "ihe ndi ozo", dị na taabụ nke aha ọ bụla. HERE anyị nwere ike ịnweta.
Onye nkwusa a na-enye nke a 14 isi nke otutu akwukwoNdị a bụ utu aha dị oke mkpa ma ọ ga-adị na ntanetị asaa dị iche iche. HERE anyị nwere ike ịnweta.
Ihe dị ka iri abụọ bụ akwụkwọ mejupụtara nhọrọ a nyere n'efu maka nbudata na PDF na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nkwusa. Site na dystopian akuko ma obu ederede iji kwado echiche di nkpa na obuna ufodu umuaka aha bụ akụkụ nke edemede dị maka nkwalite a. HERE anyị nwere ike ịnweta.
Wayszọ ndị ọzọ iji nweta akwụkwọ n'efu na iwu
Lee anyị ga-ezu ezu nyiwe kachasị mkpa maka ikesa ọrụ edemede, na mgbakwunye na ịnwe njedebe nke ịkwụ ụgwọ, ha nwere nnukwu katalọgụ nke nhọrọ n'efu. Ọ bụ ezie na nke a abụghị nkwalite n'ihi ọnọdụ dị ugbu a, ọ bụ ihe anyị nwere ike ịchọta n'afọ niile.
La echekwa otu odi nma na akwukwo dijital, ebe anyi nwere ike ichota onyinye di omimi nke Kindle eBooks n'efu. Omuma nke akwukwo n'asusu anyi, dika oru site na Cervantes, Lorca ma ọ bụ Miguel Hernandez… Wdg. Anyị nwekwara ike ịchọta ọrụ mba ọzọ tụgharịrị gaa n'asụsụ anyị, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịmara ọtụtụ asụsụ ị nwekwara ike ibudata ha n'asụsụ ndị ọzọ. HERE anyị nwere ike ịnweta.
Amazon na mgbakwunye na inwe nnukwu onyinye nke akwụkwọ n'efu, na-enye ọbụna utu aha ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị bụ Amazon Prime ahịa, yabụ na ị ga-enwe mbelata ịzụta Kindle Paperwhite anyị megoro nyocha HERE, ịnụ ụtọ akwụkwọ dijitalụ gị niile.
Na weebụsaịtị a anyị nwere ike ịchọta karịa Akwụkwọ 18.000 na Spanish ka anyị wee nwee ike ịkpọ ha n’ consultntanet. Nwere akwụkwọ n'asụsụ dị iche iche, maka ngụkọta nke akwụkwọ nde 1,4. Ha akwụsịla usoro nchere mbinye ego oge a na-ekewapụ iche. Anyị nwere ike budata mfe otutu ọdịnaya, ma n'ime PDF dị ka ePUB, utu aha ndị kacha adọrọ mmasị gị, ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị sie ike nke ọdịbendị edere anyị nwere ike ịchọta. HERE anyị nwere ike ịnweta.
Na nke a ọ bụ ọrụ ịkwụ ụgwọ n'okpuru ndenye aha ọnwa, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịnweta a Trialbọchị ikpe n'efu. Anyị nwere ike ịchọta ihe kariri ihe edere edere edere edere 1000 karia akwukwo akwukwo, ihe dị mma nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịpị anya anyị n'abalị. A na-achịkọta ndị a n'etiti ndị na-ere ere kacha mma, akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ. Anyị nwere ngwa maka iOS dị ka android. Anyị nwere HERE nweta weebụsaịtị gị.
N'ebe a, anyị nwere ike ịchọta puku kwuru puku klas na-ekesa n'enweghị ekele maka ngalaba ọha, anyị nwere aha dịgasị iche iche. E debere ha n’otu n’otu. Ha na-ekewa n'etiti ndị na-abụghị akụkọ ifo ma ọ bụ ndị na-abụghị site na ujo egwu iji nyere aka na akwukwo. HERE anyị nwere ike ịnweta.
Ọrụ ịkwụ ụgwọ ọzọ dabere na ndenye aha maka nkesa akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ nduzi. Agbanyeghị, ọ nwere Trialbọchị ikpe n'efu. Nwere ngwa maka iOS y android ya mere ọ ga - eme ka ọ dịrị anyị mfe ịnweta ya site na ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ ndị a. Anyị ga-enwetakwa ohere site na mbadamba, ndị na-agụ akwụkwọ ntanetị na kọmputa. HERE anyị nwere ike ịnweta weebụsaịtị gị.
Oge a bụ ọrụ anyị na-ahụ ebe ahịa ndị ode akwụkwọ nwere onwe ha ndị na-edezi aha ha. O nwere ngalaba a kapịrị ọnụ nke a na-achịkọta ndị niile nwere nhọrọ nbudata n'efu na usoro dijitalụ. Dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile kewara ụzọ, n'etiti nke anyị nwere ike ịchọta biography, humanities na akụkọ ihe mere eme, na uri ma ọ bụ akparamaagwa. HERE anyị nwere ike ịnweta weebụsaịtị gị.
Na-agụ, na-amụta na-eto eto bụ ha catchphrase. E kewara ya na ngalaba 3, «akwụkwọ akwadoro "," akwụkwọ na ederede na PDF "yana" akụrụngwa iji melite ọgụgụ gị, isiokwu ndị nwere mmasị na nhọrọ akwụkwọ, na-enye akwụkwọ na ihe ndị nwere ikikere n'efu Creative Commons (ọ bụ nzukọ na-abaghị uru raara nye ịkwalite ohere na mgbanwe ọdịbendị) dị na ịntanetị. HERE anyị nwere ike ịnweta weebụsaịtị gị.
Anyị na-akwado iji akwụkwọ eletrọnịkị nke anaghị eji ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ maka ntughari ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgụ abalị, ebe ọ bụ na nke a nwere ike ịkpatara anyị nsogbu anya na ehighị ụra. Ọ bụrụ na anyị enweghị ngwaọrụ nke ụdị a anyị nwere ike ịhọrọ iji -acha anụnụ anụnụ ìhè nyo ma ọ bụ ọgụgụ mode nke na-eweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Ebe nrụọrụ kachasị mma iji budata akwụkwọ n'efu